Baby Birthday ịkpọ òkù: Olee ka Pụrụ iche Baby Birthday ịkpọ òkù
> Resource> Atụmatụ> Mee Pụrụ iche Baby Birthday akwụkwọ ịkpọ òkù maka Big Omume
Baby ụbọchị ọmụmụ bụ ihe nāgara milestone nke nwa ibu, karịsịa mbụ nwa ụbọchị ọmụmụ. Usọrọ ndị a dị ịrịba ama ihe, ụbọchị ọmụmụ akwụkwọ ịkpọ òkù bụ nnọọ ná mmalite ka iju gị ọbịa. A pụrụ iche nwa ụbọchị ọmụmụ òkù ga-gị na ụmụaka na ndị enyi ha sitere n'ike mmụọ nsọ na dọtara site na-egbuke egbuke agba, na-akpa ọchị oyiyi, mara mma ụmụ anụmanụ, na na. Ọ pụrụ ịbụ unbelievable na nwa gị ụbọchị ọmụmụ akwụkwọ ịkpọ òkù ịgwa ndị ọbịa ma ọ bụ a nwa ụbọchị ọmụmụ ọzọ na-echeta.
A zuru okè nwa ụbọchị ọmụmụ òkù kaadị ga ghọọ a keepsake ọnụ na-agaghị echefu echefu milestones. Ntak hazie a pụrụ iche nwa ụbọchị ọmụmụ òkù na-a zuru okè akụkụ nke obi ụtọ memories.ore: Lee ụfọdụ Baby Mbụ Birthday ịkpọ òkù echiche.
Baby si 1st ụbọchị ọmụmụ bụ ọbụna dị ka pụrụ iche dị ka ọmụmụ onwe ya. N'ihu mbụ ụbọchị ọmụmụ, ya mere ọtụtụ firsts mere. Mkpa ka ị relive ndị a ụtọ na-echeta, ma na-abịaru ọgwụgwụ ha site n'idebe oge nke afọ n'uche. Dị ka banyere ka 1st ụbọchị ọmụmụ òkù echiche, ịhụ n'okpuru.
1. Ònye ka na-agba. N'akuku ezinụlọ na ndị enyi na-ebi ndụ dị nso, na-agba ndị ọzọ ụmụaka na ndị mụrụ ha na gị na ụmụ mgbe nile na na na. Ọ bụ ezigbo oge n'ihi na ma ụmụaka na nne na nna na-ekwurịta okwu na ndị ọzọ.
2. Number 1 ruo mgbe ebighị ebi. Na-agụnye nnukwu # 1 na kwa nwa aha, nakwa dị ka nwa ọhụrụ ahụ ụbọchị ọmụmụ ọzọ ụbọchị, oge, na ọnọdụ na nọmba ekwentị.
3.-adịbeghị anya foto. Ka ndị ọbịa maara onye mbịne 1 na a na-adịbeghị anya foto. Ha ga-eju: Olee mara mma ọ / bụ!
4. Otu ụbọchị ọmụmụ kandụl.
Chọrọ ike a ụbọchị ọmụmụ òkù kaadị na gị onwe gị? Ntak nwalee DVD ngosi mmịfe Nrụpụta? Ọ na-ahapụ gị mfe ime ka a ahaziri nwa ụbọchị ọmụmụ akwụkwọ ịkpọ òkù na nza nke tupu-e kaadị template, collage ndebiri na kalenda ndebiri. N'okpuru ebe a bụ mfe iji mee ka a printable nwa ụbọchị ọmụmụ akwụkwọ ịkpọ òkù nzọụkwụ site nzọụkwụ.